Ny fomba Hitsena ny Zazavavy an-Tserasera
Isika rehetra dia mitifitra ny kintana, indrindra fa rehefa ny fitiavana sy ny fitadiavana olona iray manokana. Isika handeha amin’ny alalan’ny am-polony maro ny sehatra fiadian-kevitra ny hianatra ny fomba fitondran-tenany, ny sasany amintsika dia manohy miezaka hatrany na dia ny fanantenana dia defusing toy ny baolina fingotra kilalao. Ny sasany amintsika, na izany aza, jereo ny fiarahana tsy ho toy ny fanoloran-tena maharitra amin’ny arivo ny sakana sy ny zava-tsarotra. Fotsiny izy ireo hankafy ny fivoriana vaovao ny olona, ary tsy overthink momba ny fifandraisana olana na inona na inona. Fa isika rehetra mandeha an-tserasera ombieny ombieny fa fotoana niavaka tamin’ny tsara tarehy olon-kafa.
Isika foana mandroso rehefa mampiaraka. Ny fifandraisana dia tsy amin’ny tena-ny fotoana foto-kevitra ihany. Ankoatra izay, online fivoriana foana mampitombo fahatokisan-tena sy ny s mora kokoa ny mahita ny resaka starter. Tsy toy ny mandany fotoana. Ara-bakiteny dia afaka hiresaka momba ny mandeha. Raha tena fiainana miresaka mitaky be dia be ny fotoana sy ny ezaka, ny resaka an-tserasera dia mora kokoa. Milaza fotsiny ny viz-a-viz fa sahirana kely, na ny valiny na oviana na oviana ianao re manana ny sasany vao nanam-potoana mba hahafantatra ny tsirairay. Izany no fomba mora kokoa. Raha toa ianao ka tsy sahy indrindra karazana olona iray, dia mety hitondra ny sasany fitavozavozan ny resaka. Ho an’ireo olona, online-mifampiresaka toa ho tonga lafatra variant. Afaka google ny sasany manan-tsaina angady-up tsipika, mandefa sms momba ny foto-kevitra ny fiaraha-mientana ifampizarana liana, na eritrereto fotsiny haingana kokoa. Indraindray fotsiny ny indray mipi-maso avy amin’ny tena olona mety ho fanamby. Afaka miseho ho marani-tsaina an-tserasera. Hihaona olona vaovao an-tserasera, ary manomboka manao hosoka na hijanona ny marina ny olona dia niakatra ho any aminao. Fa inona mazava ho azy, dia ny hoe isika rehetra dia mila ny sasany fanampiny-fanohanana amin’ny sasany, foto-kevitra nandritra ny resadresaka. Ohatra, raha ny ankizivavy iray nanontany anao bummer fanontaniana momba ny vanim-potoana ny Lalao ny Seza fiandrianany izy, ka tsy nandao ny fijerena azy eo ny iray, ianao na mety tsy manampy ny tenanao. Tsara kokoa tsy ho tratra ho an’ireo lainga, ny tovolahy iray. Miaiky izany, isika rehetra dia te ho bebe kokoa likeable sy cleverer eo imason ny olona malala. Online fivoriana dia tsy ho toy ny fanoloran-tena. Raha hitanao fa ny fifandraisana no tena tsy miasa avy koa rehefa nieritreritra fa izy no atao, dia afaka fotsiny afa-mandositra ny lahatra sy ny manakana ny olona na ny tamim-panajana, lazao fa ny resaka dia ny. Ankoatra izany, dia t mitaky ho be herim-pony sy ianao dia hahatsapa ny indray mipi-maso ny fikambanana tsy mahatsiaro ireo mampalahelo maso mandrakizay. Fanamarihana: aza t mpisolo toerana vokany, mifidy ny hilaza ny zava-drehetra amin’ny aterineto raha toa ianao ve efa fihaonana eo amin’ny tena fiainana, noho izany dia tena ambany dia ambany sy tsy mahalala fomba hampitsaharana ny fifandraisana toy izany.
Be dia be ny olona eo amin’ny fiainana tena izy dia matahotra na fotsiny dia tsy afaka hivory hiaraka amin’ny ankizilahy na ankizivavy satria ny fahamaotinana. Noho izany, dia tonga ny fanampiana ny Aterineto, izay afaka miala sasatra sy tsy hiditra mivantana ny fifandraisana raha tsy misy ny tena fiaraha-mientana ifampizarana ny tombontsoa avy amin’ny taratasy. Tambajotra sosialy hanomezana hery olona. Ireto misy afaka mifandray amin’ny olona maro indray mandeha, ary hisafidy na ny akaiky indrindra fanahy kambana. Mihaona amin’ny olona an-tserasera sy ny fiheverany ny tenany ho tosika. Amin’izao fotoana izao dia maro ny olona no tia fampielezana ny sary ao amin’ny tambajotra sosialy. Ny olona rehetra miandry tiana tia sy ny fanehoan-kevitra eo ambany ny mombamomba ny sary. Ny s ka mahafinaritra ny hahazo ny fankasitrahana avy amin’ny namana, na olon-tsy fantatra. Tena izany dia mampitombo ny tena misy vidiny. Ny Aterineto blurs ny sisintany misy eo amintsika. Raha izany no nanjo anao hihaona olona vaovao an-tserasera, ianao angamba mahalala fa ny fahatsapana miaraka na raha toa ka misy zato sy arivo kilaometatra eo aminao. Ankehitriny dia efa online-internet, Facetime, Facebook, Instagram, Skype sy ny maro hafa mpanampy amin’ny fanatrarana ny tanjona akaiky kokoa ny fahazoana ny teny ny olona. Tsy velona ny fifandraisana. Misy virtual fifandraisana, tsy mampaninona na mahafinaritra izany, dia tsy hisolo mivantana ny resaka, izay ny teny dia nanaraka ny fihetseham-po, ny fihetsika sy ny endrika. Dia voafitaka isika eo amin’ny zavatra andrasana aorian’ny fihaonana. Indrisy anefa, miaraka amin’ny virtoaly ny fifandraisana misy ny toetran ny interlocutor mety ho tena sarotra ny mamantatra. Ary eto dia tonga ny tsy azo ialana fahadisoam-panantenana tao amin’ny tetezamita ho velona ny fifandraisana. Ao amin’ny virtoaly taratasy, ny olona iray dia afaka ny ho tsara, fa eo amin’ny fiainana andavanandro, dia mety tsy ho ny karazana olona rehetra. Ny fiankinan-doha mba virtoaly ny fifandraisana. Maro ny olona lasa mitoka-monina ny Aterineto sy ny manakana tsotra fotsiny ny fifandraisana velona. Ny Aterineto dia toy ny spider fa lures ho amin’ny harato. Ny olona lasa miankin-doha amin’ny fifandraisana tamin’ny tambajotra sosialy. Ary izany no zavatra ratsy indrindra. Noho izany, niverina ho any amin’ny fanontaniana hoe: manao Internet olom-pantany tena miasa. Azo antoka, zavatra ataony. Izany dia zava-dehibe ihany ny mamantatra misy poizina sy ny tsy mahomby mpiara-miasa, ary ny zavatra rehetra ho tsara rehetra. Misy an-jatony ary an-jatony ny tantara momba ny olona izay nahita ny tsara kokoa ny antsasaky ny ao amin’ny Aterineto. Izy ireo chat, hahafantatra ny tsirairay, mifandray, manapaha hevitra, mikasa. Ny s toy ny tsara tarehy Internet nofy tantara. Fa ny olana dia raha te-hamindra izany online-pitiavana ho zavatra lehibe kokoa. Namako nahita zazavavy iray online-lalao karajia. Tsy ela dia nanomboka niaraka tamin’ny tena mahaliana fomba izany no Skype mampiaraka. Taorian’ny efa ho taona iray ny fiaraha-mientana ifampizarana fihetseham-pony ny lehilahy nanapa-kevitra ny hanidina ho any ny firenena, mba hihaona voalohany. Izany no marina, ny fahadisoam-panantenana ho an’ny olona izay nandany vola be sy ny ezaka raha ny ankizivavy izy nihaona nandà azy noho izy tsy mahalala fomba ny namany ary tsy ny karazana ihany. Heveriko fa ny fanehoan-kevitra dia tsy ny tsara indrindra. (Avy amin’ny anarana vahiny) efa nihaona tamin’ny vadiko amin’ny Kristianina toerana. Izy dia efa zokinjokiny man, tena tsara tarehy sy tsara fanahy izy, dia niresaka ny foko Rehefa afaka volana vitsivitsy, dia nanolo-kevitra ny hifindra monina any Utah niaraka taminy. Tsy afaka mino fa ny olona toy izany dia mety ho ao amin’ny Internet. Toa tahaka izany dia anjarantsika. (Avy nanaiky ny mpampiasa) Rehefa avy namaky ireo zavatra roa samy hafa tanteraka ny tantaran’izy ireo dia afaka mahatakatra fa ny vokany dia afaka ny ho samy hafa tanteraka. Dia manohy ny fifandraisana izay mitaky ny tetezamita avy any an-tserasera — ny tena fiainana sata? Raha ny valiny dia tsara, dia mifindra ho amin’ny lohahevitra manaraka. Rehefa afaka hihaona zazavavy an-tserasera. Ny valiny dia mihoatra noho tsotra. Misy eo ho eo ny gazillion toerana izay mandroso mba hanampy anao hahita ny tsara kokoa ny antsasaky. Ireo dia: fiarahana toerana, online-group chats ho an’ny olona toy izany koa ny tombontsoa, ary, mazava ho azy, ny haino aman-jery sosialy, anisan’izany ny Tinder, Facebook sy ny sisa. Azonao atao ny manamarin avy famerenana amin’ny fotoana rehetra mba hanapa-kevitra izay te-miala. Rehefa tokony hihaona ny vehivavy an-tserasera? Isaky ny aterineto ny fihaonana dia tokony ho mety, noho izany an-tsaina ny zava-misy afaka angamba isan ny roa samy hafa cérébral sy facetiming ny olona, amin’ny alina dia tsy dia mahafinaritra. Fa tsy, mangataka ny vanim-potoana ny andro rehefa ny s mety mba hiantso na lahatsoratra. Mety ho izy mandritra ny fivoriana raha ianao be dia be ny mahantra girl amin’ny fampahatsiahivana.) Ny mombamomba feno amin’ny fampahalalana manan-danja. Raha ny pejy ahitana afa-tsy ny voalohany sy ny farany anarana, na misy na inona na inona mihoatra noho ny anaram-misy, dia tsy maninona na dia miezaka mafy aza ianao mba hisambotra ny zazavavy miaraka amin’ny hafatra, izy dia tsy hamaly anao. Noho izany rehetra izany dia toy ny mijery sandoka bot na ny sasantsasany tamin’ireo namana izay nanapa-kevitra ny hilalao ny fitaka ao aminy. Fa dia nahoana ianao no mila mameno ny mombamomba azy mazava tsara sy araka ny tokony ho izy, noho izany fa ilaina rehetra ireo fanontaniana dia hanjavona. Izany dia ampy mba hanoratra hevitra vitsivitsy: — tanàna, taona, ny tena ny voalohany na ny farany anarana, ny mampakatra sary tsara. Ity kely indrindra takiana fotsiny dia tsy maintsy ho eo amin’ny pejy. Ny mombamomba anao (ny virtoaly tena-sary) ao amin’ny Aterineto. Ny tena maneho hevitra. Noho izany, sasao ny tavanao alohan’ny mampiseho izany amin’ny izao Tontolo izao.) Ny zavatra voalohany izay misy zazavavy dia tsikaritry ny ny bika aman’endriny. Raha toa ka mampakatra ny taloha sary, avy eo dia manome tsiny ny tenanao.
Tsy hisy valiny ianao
Sary tokony ho vaovao ary manana ny toetra tsara. Mifidy ny sary, izay dia misy toerana mangatsiatsiaka na manaraka ny zavatra mahaliana, noho izany dia afaka ny ho resaka-starter. Mampakatra ny sary sasantsasany miaraka amin’ny namana (tsara ny sary, fa tsy misy club mitarika ho amin’ny filibana). Dia ho tsara raha toa ka ny namana mijery mendrika sy mendrika, tsy eo amin’ny fanatanjahan-tena tiany sy amin’ny toaka. Teboka manan-danja iray hafa — ny fiovana sy ny vaovao farany ny sary, dia mampiseho fa velona ny mampientam-po ny fiainana, handeha, ny any mangatsiatsiaka ny toerana. Ny liana ny tovovavy dia hitombo, ary izy dia te-hanohy ny fifandraisana. Ny sary dia ny fomba fiainantsika.) Firesahana ny momba ny fivavahana sy ny politika. Na dia zava-dehibe manahy noho ny toe-draharaha politika ao amin’ny firenena, na dia faran’izay tsy mino an’andriamanitra, tsy mila lahatsoratra momba izany mba tsy hiseho ny fanatic. Ny ankizivavy dia mety mieritreritra fa ianao re iray adala olona, izay mampiasa ny tambajotra sosialy toy ny mpitondra tenin’ny noho ny hevitra. Alaviro ny zavatra toy izany, satria ny tena tanjona dia ny mba hihaona ankizivavy an-tserasera, ary tsy mba hiresaka momba ny fomba fijeriny ara-politika.) Ny sakafo no tena zava-dehibe. Miezaka ny mameno ny fizarana momba ny tenanao betsaka araka izay azo atao, tsy hajia sy ny tsy hanoratra sandoka zavatra toy professional gitara-mpilalao rehefa amin’ny ankapobeny na dia tsy afaka milalao ny hira. Manoratra momba ny toerana tena boky, sarimihetsika — aoka ho mihoatra noho ny fitsipika napetraka ny mpampiasa, miezaka ny hijoro ary ho afaka mihaona amin’ny olona an-tserasera. Ampio vitsivitsy feno fihantsiana nalaina sy miafina — amin’ny kely indrindra, izy dia ho liana ny momba ny zavatra s ao an-doha sy izay karazana lehilahy nanoratra toy izany. Ary izany dia midika fa tsy tratra ny tanjona. Raha fintinina dia te-maniry anao ho hendry sy matoky tena, marina sy ny namana. Ny olona foana ny fahalavoana noho ny fanaovana ny marina, tsy sandoka mampamangy na angady-up tsipika. Ho diamondra ao cheap antontan-pako antsoina hoe haino aman-jery sosialy, misafidy ny mpiara-miasa amim-pahendrena sy amin’ny ankapobeny ho sambatra. Vehivavy online miandry ny mpanjaka tahaka anao
← Shinoa mampiaraka toerana - Free online dating ao Shina